भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरु, प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा उद्घाटन
नेपाली पब्लिक शनिबार, माघ ३, २०७७
भारतमा कोरोना भइरसविरुद्धको खोप लगाउन शनिबारदेखि शुरु गरिएको छ। भिडियो सम्मेलनमार्फत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप अभियानको शनिबार उद्घाटन गरेका हुन्। यस अभियानलाई विश्वकै सवैभन्दा ठूलो खोप अभियान भनिएको छ।
अभियानअन्तर्गत सवैभन्दा पहिला कोरोनाविरुद्धको लडाईमा अग्रपक्तिमा खटिएकाहरुलाई खोप लगाउने मापदण्ड बनाइएको छ। अग्रपक्तिका सेवाप्रदायकसहित पहिलो चरणमा झण्डै तीन करोड मानिसलाई खोप लगाउने भारतीय सरकारको तयारी छ।
खोप लगाउनका लागि देशभरी तीन हजार ६ ठाउँमा खोप केन्द्रको व्यवस्था गरिएको र ती सवै भर्चुअल माध्यमबाट एक अर्कामा सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। आज पहिलो दिन हरेक खोप केन्द्रमा सय जनाको दरले खोप लगाउन सक्ने बताइएको छ।
खोपका लागि एकिकृत बालविकास सेवाका कर्मचारीसहित सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सवैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।दैनिक विहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खोप सेवा उपलब्ध गराइने केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्ष बर्धनले जानकारी दिए। उनले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु हुनुलाई ‘कोरोनाको अन्त्य नै शुरु भएको रुपमा लिएका छन्।
अर्को चरणमा ५० बर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई मात्रै खोप दिइने मापदण्ड बनाइएको सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। बृद्धबृद्धाहरु कोरोनाभाइरसबाट संक्रमण उच्च जोखिम हुने र संक्रमित भइसकेपछि जित्न पनि गाह्रो हुनेभएकाले उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनीहरुले बताएका छन्। उमेरले ५० बर्षभन्दा कम भएकाहरु पनि गम्भीर अवस्थाका विरामी छन् भने पनि उनीहरुलाई खोप लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
भारतमा दुई प्रकारका खोप लगाउनका लागि सरकारले अनुमति दिएको छ। यही ३ जनवरीमा खोप लगाउन अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। भारत बायोटेकले बनाएको कोभ्याक्सीन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग एस्ट्राजेनेका कम्पनीले बनाएको कोभिशिल्ड प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको हो। खोप अभियानको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना महामारी विरुद्धको सङक्रमण भारतीयहरु एकताबद्ध भएर लडेको बताउँदै खोपका लागि पनि भारतले कडा परिश्रम गरिरहेको बताए।
‘यती धेरै जनसंख्या भएको भारतमा महामारीका समयमा मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदा क्षति कम भएको छ। एक करोडभन्दा बढी मानिसहरुले महामारीसँग लडेका छन् र जितेका छन्। अन्य मुलुकभन्दा भारतमा महामारीको प्रभाव निकै न्युन छ’ उनले भने।
#भारत #कोभिड–१९ #प्रधानमन्त्री #खोप #कोरोना_भाइरस #नरेन्द्र_मोदी #बायोटेक #कोभ्याक्सीन #अक्सफोर्ड_विश्वविद्यालय #एस्ट्राजेने
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७
मंगलबार, असार १४, २०७९ बाढीका कारण विराटनगरका १९९ परिवार विस्थापित
मंगलबार, असार १४, २०७९ काठमाडौं महानगरपालिकाको सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध
मंगलबार, असार १४, २०७९ बुढीगण्डकी जलविद्युत् बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय
मंगलबार, असार १४, २०७९ प्रदेश नं १ : मन्त्रालयगत छलफल सकियो
मंगलबार, असार १४, २०७९ काठमाडौंबाहिर ३५ विमानले रात्रिकालीन पार्किङ थाले
मंगलबार, असार १४, २०७९ मनसुनजन्य विपदबाट देशभर २० लाख जना प्रभावित हुने अनुमान
बाढीका कारण विराटनगरका १९९ परिवार विस्थापित
काठमाडौं महानगरपालिकाको सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध
प्रदेश नं १ : मन्त्रालयगत छलफल सकियो
काठमाडौंबाहिर ३५ विमानले रात्रिकालीन पार्किङ थाले
प्रदेश नं १ : मन्त्रालयगत छलफल सकियो नेपाली पब्लिक
बाजुराको बुढीगंगामा पुनः मतदान रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश नेपाली पब्लिक
अब त फोहोर उठाउ बालेन्द्र, हैजाले जनता मर्ने अवस्था आउन थालिसक्यो !
‘३ भारतीयले लिफ्ट मागे, फोटो खिच्ने बाहना बनाउँदै कुटपिट गरी गाडीसमेत लुटे’
लिफ्ट मागेर कर्मचारी लुट्ने गिरोह पक्राउ
तरकारी ल्याउने विषयमा विवादः साथी बोलाएर सहोदर दाईको घाँटी रेटेर विभत्स हत्या
एसीसी महिला टी–२० च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा
सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाको अन्तरसमन्वय बैठक सम्पन्न
डुंगा पल्टिँदा बेपत्ता भएका ६ जनाको सकुशल उद्धार
इमेल ठेगाना news@nepalipublic.com marketing@nepalipublic.com